Daawwannaa MM Abiy Ahimad: Hariiroon Itoophiyaa fi Somaaliyaa nageenyarraa taraa? - BBC News Afaan Oromoo
Madda suuraa, MOHAMED ABDIWAHAB
Itoophiyaa fi Somaaliyaan walta'iinsa diinagdeerratti waliigalaniiru
Ministirri muummee Dr Abiy Ahimad daawwannaa isaanii Sanbata darbee Somaaliyaatiin hooggantoota biyyattii olaanoo waliin marayitanii dhiyeenyatti walta'iinsa diinagdee hunda galaa uumuuf waliigaluu, miidiyaa biyyaalessaa ETVf ibsa kennaniin himaniiru.
Ibsa isaanii kanaan yeroo dheeraa keessa ammoo hariiroo uummattoota biyyoota lameenii cimsuun biyya tokko gara ta'uutti deemuuf waliigaluus himanii jiru.
''Qabeenya uumaamaafi buufata galaanaa amma naannicha jiru gara sadarkaa olaanaatti guddisuun akkuma Ameerikaa, Yunaaytiid Arab Eemireet ykn Awuroppaatti, addunyaa irratti gidduu gala daldalaa tokko taanee dandeetti keenya haala cimsinu irrattis waliigalleerra'' jedhan.
''Nuti buufata galaanaa hin qabnu jenna, gama saniin ammoo guyyaatti dooniin tokko haala itti irra hin yaballetu jira, lachan keenyayyuu hiyyeeyyiidha'' kan jedhan Dr. Abiyyi, wal ta'uun waan qaban walii qoodanii guddachuuf carraan jiru guddaa ta'uu kaasaniiru.
Qabeenya qabnu walitti ida'uun naannoo buufata doonii baayyee qabu, qabeenya uumama baayyee qabu, uummata guddaa qabu fi tokkoome Gaanfa Afrikaatti ijaaruun akka danda'amuus eeraniiru.
Mariin biyyoota lameenii kun maal hima laata?
Hiriiroo biyyoota lameenii seenaa walitti bu'iinsaa qabu fi dhimmoota tasgabbiirratti rarra'ee ture keessatti mariin alanaa abdachiisaadha jedha, Hundessaa fi hoogganaan Marsariitii Walabaa Opride.com Mohammad Adamoo.
''Walta'iinsa diinagdee fi yaadni walta'uun buufata doonii ijaaruu, daandii konkolaataan walqunnamuu kun qaama jjiiramaa hoggansa haaraa Itoophiyaa keessatti jijjiiramoota fidaa jiruutis'' jedha Mohammad.
Biyyaa dhabinsa buufata dooniitiin keessumaa erga Eertiraa wajjin gargar baatee booda rakkachaa jirtu, Itoophiyaaf, mariin biyyoota lameen kanaa hiika guddaa qabas jedha.
''Erga Eertiraan bara 1993 tti of dandeessee fi lola daangaan erga wal waraananii booda, bittaafi gurgurtaan biyyattii harka 95 kan ta'u buufata doonii Jibuutii keessa darba''
baasii guddaa buufata tokko qofaarratti hirkachuun qabu caala meeshaleen dafanii qaqqabuu dhabuufii baasii wajjin walqabatu jira'' adeemsi amma eegalame biyyattiif filannoo biroo kennuu malas jedha.
Biyya uummata miiliyoona 100 ta'u qabdu, diinagdeen ishee guddachaa jiruufi fedhi diinagdee biyyattii daranuu dadammaqsuu jiruuf tarkanfiin kun bu'a qabeessa jedha.
Qaama galaanaa Somaaliyaa kanarraa biyyoota akka Tarkii fi UAE ti tu irraa bu'aa guddaa argachaa jira.
''Qarqarri qaama galaanaa Somaaliyaa akkaan hin misoomne. Itoophiyaa kophatti dandeettii buufata kana ijaaruu hin qabdu'' kanaafis deeggarsa qaama biraa fedhu jedha Mohammad.
Akka yaada Mohammaditti Hariiroo biyyoota lameenii nagaafi tasgabbiirratti rarra'ee ture gara walta'iinsa diingadeefi daldalaatti ol guddisuun biyyoota lameeniifu bu'aa buusuu danda'a.
17 Ebla 2018
Soofiyaafi MM Dr. Abiy Ahimad waliin irbaata nyaachuufi
Gamtaan Afriikaa pirezidaantiin Somaalee aangoo dheereffachuu morme
Awwaalcha dubartii Covid'n duuteen sodaan vaayirasichaa gandashee waliin ga’e
Namtichi waggoota 15'f osoo hin hojjatiin mindaa fudhachaa ture to'atame